जब बेहुला बेहुलीलाई दाइजोमा मानिसको मुटु, मृगौला र आँखा दिइयो ! | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepalजब बेहुला बेहुलीलाई दाइजोमा मानिसको मुटु, मृगौला र आँखा दिइयो !
Home अन्तर्राष्ट्रिय जब बेहुला बेहुलीलाई दाइजोमा मानिसको मुटु, मृगौला र आँखा दिइयो !
जब बेहुला बेहुलीलाई दाइजोमा मानिसको मुटु, मृगौला र आँखा दिइयो !
बिहेमा विभिन्न खालका सामानहरु दाइजो तथा उपहारको रुपमा दिने चलन त नौलो होइन । दैनिक प्रयोगका सामानहरु देखि गरगहना र सजावटका सामानहरु समेत दाइजो र उपहारको रुपमा दिइन्छ । तर जब बेहुला बेहुलीलाई बिहेमा मानिसको मुटु, मृगौला र आँखा दिइन्छ, तब के होला हालत ?
हालै भारतमा एक दम्पत्तिको बिहेका क्रममा उपहारको रुपमा मानव अंगहरु दिइयो । राजस्थानको कोटा सम्भाग क्षेत्रका टिंकु ओझा नामक युवकको बिहेका क्रममा आगन्तुकहरुले उपहारको रुपमा आफ्ना अङ्गदान गरे ।
अनौठो त के भने विवाहको लागि निम्ता गरिएका निमन्त्रणा कार्डमै बेहुला बेहुलीका लागि उपहारको रुपमा अरु चिज नल्याउन र उपहार दिने भए आफ्ना अङ्गदान गर्न भनिएको थियो ।
यस्तो निमन्त्रण कार्ड देखेपछि धेरै आफन्तहरु त बिहेको निम्तो मान्नै आएनन् । तर जति आए त्यसमध्ये धेरैले आफ्नो अङ्गदान गर्ने कबुलियतनामा पत्र उपहारको रुपमा बेहुला बेहुलीलाई प्रदान गरे ।
बेहुला ओझा स्थानीय एउटा संस्थामा काम गर्दछन् । शाइन इण्डिया फाउन्डेसन नामक उक्त संस्थाले अङ्गदान तथा सरीरदान सम्बन्धमा जागरुकता फैलाउने तथा अभियान चलाउने काम गर्दछ । मानिसहरु अंगदान गर्नुपर्ने भनेपछि डराएर बिहेमै नआउलान् भन्ने सम्भावना भएपछि उक्त संस्थाका केही स्वयंसेवकहरु बिहेको अघिल्लो दिन गाउँभरी घुमेर अंगदानको बारेमा जनचेतना फैलाएका थिए ।
उक्त बिहेमा आएका पाहुना मध्ये ३५ भन्दा धेरै मानिसले आफ्नो मृत्युपछि आफ्ना विभिन्न अंगदानको घोषणा गरे । त्यस्तै ११० जनाले नेत्रदान गर्ने र ३ जनाले मृत्युपछि सरीर दान गर्ने कबुलियतनामा उपहारको रुपमा बुझाए ।
रोचक त के भने बेहुला टिंकु र बेहुली तृप्तिले सबैभन्दा पहिले बिहे समारोहमा आफ्नो अंगदान गर्ने संकल्प पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
रक्तअल्पता: लक्षण र बच्ने उपाय
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा वेपत्ता छानविन र सत्य निरुपण आयोग विधेयक प्रमाणीकरण